SHARIIF KUDLADUU DHISAY SHAKUUR IYO GEESAY LAGU DILI GAARAY IYO TII JAWAARI KA HEESAY TUMAA ADKAAN DOONTA
29 December, 2017 in by Adam Increase
Madal cusub oo looga dhawaaqi doono Baydhabo, Yaa soo jeediyey in xasaanada laga qaado 2 xildhibaan? Hadana yaa bedbaadiyey? Jawaari oo siyaasad cusub kusoo kordhiyay saaxada siyaasada soomaaliya. Wixii ka danbeeyey dilkii cabaas Siraaji iyo kiisk
Madal cusub oo looga dhawaaqi doono Baydhabo, Yaa soo jeediyey in xasaanada laga qaado 2 xildhibaan? Hadana yaa bedbaadiyey? Jawaari oo siyaasad cusub kusoo kordhiyay saaxada siyaasada soomaaliya. Wixii ka danbeeyey dilkii cabaas Siraaji iyo kiiskii Qalbidhagax dowlada soomaaliya waxay la kuluntey hirar iyo mowjado mucaarado ah kuwaas oo kaga imaanayey kooxo leh ujeedooyin kala duwan.
Waxaana dhegaha shacabka soomaaliyeed soo gaarayey mooshino kala duwan kuwaaso ku qotomey seddexda masuul ee ugu sareysa dalka sida Ra’isul wasaaraha, madaxweynaha iyo Guddoonka Baarlamaanka.
Mooshinadaan kadib waxaa bilowdey in seddexda masuul mid kast si gooni ah u kala furfuro mooshinka isaga ku qotoma, hadaba sheekada xiisaha badan waxey dhaxmartey seddex kooxood oo kala ah Jawaari, Shariif Xasan iyo xildhibaanada mucaaradka ah ee u badan beesha Hawiye.
Madaxweyne Shariif xasan sheekh oo khabiir ku ah kala furfurka iyo mooshinada ayaa waxaa uu damcey in uu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya isagoo ka faa'ideysanaya xildhibaanada mucaaradka ku ah dowlada ee ubadan beesha Hawiye iyo Raxaweyn oo shariif badankooda gacanta ku haayo, sababto ah shariif xasan ayaa tuhumey jawaari in uu dabada ka riixaayo mucaaradka koonfur Galbeed isagoona shaariif xasan damacSanaa in walalkiisa marna soo noqdey wasiirka caafimaadka soomaaliya oo lagu magacaabo MADEER uu ka dhigo Madaxweynaha Koonfur Galbeed, kadibna xildhibaanada dowlada fedralka ee mucaardka ah ka dhaadhiciyo in xilka laga qaado jawaari kadibna shariif xasan wiilkiisa oo ka tirsan baarlamaanka xilka ugu dego si shariif xasan xubin baarlamaanka ka tirsan uu unoqdo, kadibna guddoonka baarlaanka isu soo taago, waxaana xusid mudan in gudoomiye kuxigeenka baarlamaanka Muudey ay saaxibo dhow yihiin shariif xasan arinkaasna hoos ka riixaayo.
Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa maalgashiga wadey isagoona shariifka hadii gudoomiye baarlamaan noqdo aaminsan yahay in uu saaxada siyaasada kasoo muuqan doono
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la qorsheeyey laguna heshiiyey in Jawaari uu yahay shaqsiga ugu fudud ee mooshin laga keeni karo, xildhibaanadii baarlamaanka ayaa bilaabey abaabul ka dhan ah jawaari, balse jawaari oo si degan u fakarey ayaa waxaa uu talo aan toos ahayn siiyey dadka taabacsan dowlada isgagoona farta ku fiiqey 2 xildhibaan oo lacag iyo firfircooni ku tuhun sanaa si dhowna shariif xasan ugu xirnaa, shakiga farmaajo beryahan ka qabo mooshin in laga keeno ayuuna ka faa'ideystey, wuxuuna jawaari hadalka u dhigey in uu soo gaaraayo mooshin ka dhan ah farmaajo, 2dan xildhinaana lacag qeybinayaan, jawaari ayaa dusiyey qodob ka mid ah qodobada xeer hoosaadka barlamaanka xasaanada ku waayi karo xildhibaan kasta oo lagu soo eedeeyo qodobkaa oo ahaa QIYAANO QARAN, balse jawaari u bedeley Qaran Dumi,s waxaa qodobkaan faa'iido u arkey kooxdii adacsaneyd dowlada ayadoo xeer ilaaliyaha guudna si indho la’aan ah warqad ugu direy 2dii xildhibaan ee jawaari taargedka ku ahaa, waxaana mar qura isbedeley jihadii siyaasada ku socotey, ayadoo isla markiiba jawaari arintii ku wargeliyey xildhibaadanadii lasoo eedeyey, xildhibaanadii oo aad u naxsan ayaa jawaari mar qura yiri "waan idin badbaadinayaa hadii aad iga dambeyneysaan, hadii kale waxba kama qaban karo." 2dii xildhbaan ayaa markiiba raaligelin siiyey jawaari, ayagoona cadeeyey cida isaga kursiga kala wereegi rabtey in shariif xasan uu yahay, jawaari ayaa hada hogaanka mucaaradka ka mid noqdey, kadib markii loo sheegey in Xasan Cali Kheyre xitaa mooshinka laga wado jawaari wax ka ogaa.
Dhanka kale, jawaari xildhbaanada keliya uguma harin la dagaalanka Shariif Xasan, maxaa yeeley Shariif Xasan wuxuu sameystey madal ay ku mideysan yihiin madaxweyneyaasha maamul goboleydyada.
Guddoomiye Jawaari ayaa isna Hada magaalada Baydhabo doonaya in uu uga dhawaaqo madal cusub oo lagu magacaabo Madasha Baarlamaanada, waxaa hada muuqata in siyaasada Soomaaliya jahweer badan gali doonto maadaama 2 madal iska soo hojeeda la dhisey
Dadka siyaasda falanqeeya ayaa walaac ka muujiyey qaabka ay wax u socodaan dalkuna dib u dhac weyn ku tahay in hada hogaamiyaal iska soo horjeeda lasameeyo.
By: Dr Maay
Soomaali Daacish ahaa oo Lagu Xirey Italiya